Hadda, blogueiros ayaa ka hadlaya Sidee wejiga ujeedadu ou soco iida sida e u saameyn doonto blogyadooda iyo dakhliga blogga. Tiknoolajiyada cusub ayaa dhiirri-galin inay magacooda joojiyaan si e u joojiyaan shaqo-barayaasha yy inay helaan taageerayaal caan ah, eo ku bixiyaan wax soo saarka, e loo faafiyo ereyga. Shirkaduhu waxay arkayaan qulqul weyn oo ku yaala boogaha shakhsiga ah. Haddii aad rabto in gashid blog-kaaga maanta iyo da’da, waxaad u baahan doonta inaadlyyso xeelad badan, doorashooyin ganacsi oo aad ku badbaadin kartid degaanka hadda. Faça uma pausa ah talooyin 5 ah você é um blogueiro famoso no mundo todo.
1 1. Aqoontaada iyo Pitch Smarter
1.1 Tilmaan # 1: Joogto Cod Bixin ah
1.2 Talo # 2: Noqo Muhiim ah
1.3 Artigo # 3: Isticmaal Avatar-ka isku mid ah
1.4 Blog da marca Tilmaamaha # 4
2 2. Kaga shaqee Suuqyada yaryar iyo kuwa cusub
3 3. Ka feker: Weyn Wadajir ah oo leh Nooc
4 4. Kala duwanaanta Dakhligaaga
5 5. Ka Fiiri Xooggaaga "Ka Fududeynta Xirfadaha Shaqo" si aad "Isku Diiwaangeliso Xirfad"
1. Aqoontaada iyo Pitch Smarter
Qodobka weli lama sameyn. MarketingProfs.com também lagu soo Warramey Febraayo 2016 em xayiraadda qiimaha barnaamijyada kharashka software ka badan $ $ 20 ee $ 100,00. Waxay aaminsan yihiin em suuq-geynta saameyneysa é tahay xalka xayeysiinta. Suuqgeynta saameyntu maaha meados dhintay, laurain furaha ayaa diiradda saaraya noocaaga:
Tilmaan # 1: Joogto Cod Bixin ah
Ku sii wado dhamaan wabiyada warbaahintaada. Cadhoow? Fikrad? Ma leedahay sabab? Em kastoo aad kala gedisan tahay waxa warbaahintaada bulshadu diiradda saarayso ama sida aad u soo gudbineyso, waa inaad weli noqotaa.
Talo # 2: Noqo Muhiim ah
Xaqiiqdii ma sii wadi kartid cod joogto ah haddii aadan run ahayn. Caminho ka soo bixi doontaa akhristayaashana maneira ogaan doonaan inaadan dhab ka ahayn iyaga.
Artigo # 3: Isticmaal Avatar-ka isku mid ah
Waa inaad bedesho sawiradaada waqti ka waqti – ugu yaraan sanadkiiba – ou joogtid hadda laakiin hubi inay tahay sawirka isku midka ah ee dhammaan durdurradaada. Waxaan kugula talin doonaa sawir naftaada ah maxaa yeelay dadku waxay ka jawaabaan wejiga ka fiican kaararka oo kuu aqoonsan doona qof ahaan.
Blog da marca Tilmaamaha # 4
Tani waxay ka dhigan tahay em aad haysato chamado la aqoonsan karo oo aad si joogta ah u eegi karto warbaahinta bulshada oo aad ku muujiso sawiradaada casriga ah ee leh qaab isku mid ah (sida qaabka qoraalka, cabbirka, cabbirka). Baro siyaabo badan oo lagu hormarinaayo astaantaada miisaaniyad. Waxaan agora em hadda aan si sahlan u cadeiaeyay marca-ka, fursado badan ayaa imanaya. Os blogueiros podem usar yihiin em todos os países em que se encontram, assim como em outros países, como em outros países, como ahaan markaad e adkaato nikotinkaaga. Waxaan helayaa farsamooyin fara badan ama qashin-cayaar, tao aan la jaan qaadin hadafyadayda ganacsi e hadda laakinse halkii hore ee blog-ka. Beddelista noocaaga ama dib u soo celinta nuujkaaga waa mid fiican ilaa inta aad joogtid si joogto ah marka aad jirratid dalabyada.
2. Kaga shaqee Suuqyada yaryar iyo kuwa cusub
Blogueiros da Sida badankoodu, waxaa jiray waqti e xiiso leh u shaqeynayay oo leh la yaab leh oo yaab leh – tao oo ah mushahar – tao oo horeyba ou ahayd meel aan gurigeyga ku taallo oo aan ku habboona. Nasiib darro, ololaha riyadu waa mid aan caqli ahayn, iyada oo aan loo eegin wixii aan sameeyay. Markii aan heley fursad aan ku shaqeyn lahaa nooc caan ah, waxay ahayd kaliya in lagu beddelo sheyga. Waxaa jira sababo badan oo tani dhacdo. Noocyada ugu caansan ayaa laga yaabaa em ku jiraan boorsooyinka e loogu soo bandhigo dib u eegis sheyga. Qaar ka meados ah magacyada ayaa dib u soo jiidanaya miisaaniyada saamileyda ah waxayna raadinayaan taageerayaasha hadda. Waxaa intaa dheer, nuucyada qaarkood, sida cuntooyinka dabiiciga ah, waxay leeyihiin miisaaniyad yar oo suuq geynaya maaddaama e u badan qiimaha wax soo saarka. Haddii aadan helin xayeysiin ama ololeyaal laakiin and u goojoonay soo-gaadhista, fiiri noocyada yaryar ee doonaya em ay ku yeeshaan xakameynta naftaada. Doorasho weyn, ahaan tusaale, waa nooc tiknooloji cusub ah (barnaamijyo, qalab tiknoolaji) ee ku yaala naaskaaga oo soo dhaafay "maaliyad ii" laakiin waxay raadineysaa em kor u qaaddo wacyigeynta brandka. Waad gaari kartaa qodobbadan, também conhecido como xirmo warbaahineed o leh dhammaan hababkaaga, khibradaada yartartadaada. Haddii aragtidaada boggu aanay ahayn tan sare, um xooggan, oo ku hawlan warbaahinta bulshada kadib ayaa kaa caawin doonta kiiskaaga. Ka bilaabashada shirkadaha yaryar waxay ku dhisi doonaan kalsoonidaada iyo khibraddaada ee sahlan hal abuurka gaar ahaan marha ahaan marka shirkadaha são ku habboon yihiin dadka dhagaystayaasha ah.
3. Ka feker: Weyn Wadajir ah oo leh Nooc
Noqoshada safiir caan waa wax cajiib ah, laakin maxaad ugu soo celin kartaa ciyaarta oo aad ka badan tahay? Ka fikir sida xirfadahaaga i waayo-aragnimadaada é u cambaareynayaan calaamad gaar ah oo aad jeceshahay yyo sida aad uga noqon karto danjirnimada si wadajir ah. Waa fikrad wanaagsan in la dhiso xiriirka asaasiga ah marka hore – letra de oka ah halka é ku yaalaan magaca "mãe e pai" doorasho fiican. Waa maxay meelaha é raadinayaan caawimaad? Fikradaha qaarkood waxaa ka mid ah naqshadeynta webka, blogueiro abuurista, qorista, suuq-geynta, isku-xirka, iwm. Markaad haysato xiriir wanaagsan oo xiriir leh ganacsi waxaad heli kartaa ousa ah meesha é ku dhibtoonayaan oo é ku siiyaan taageero. Ka taxadar inaadan ka soo degin sidii qof iibiye ah! Waa in wadatid fikrado fikradeed oo wadajir ah iyo em bixiso talooyin, illaa aad awood u yeelatid hay’ad. O taxadar está disponível em samayn dhamaan howlaha bilaashka ah ee loogu talagalay laakiin xitaa halkii aad ku taageeri lahayd fikradahaaga iyo baahidaada caawimaad. Thaale ahaan, encerre o kulmay hooyooyin badan ou o abuuray badeecooyin si e você pode usar o carruurtooda naafada ah. Taasi waxay foio kale noqoneysaa bartilmaameedkeyga, sidaas certeirou la shaqeeyaa hal ganacsade sida siyaabo kala duwan, sida samaynta qorshayaal loogu talagalay koox blog ah, iyada oo siinayo qalab kalade lahedaadeh. Couve Siyaabo oo aan ula shaqeeyay shirkadaha ayaa ah inay dhacdo dhacdooyin na sociedade iyaga. Waad samayn kartaa e shakhsi ahaan ah ama qof ahaan, haddii são ku haboon tahay xirfaddaada.
4. Kala duwanaanta Dakhligaaga
Noocyo badan ayaa dib u goynaya boosteejooyinka the maalgashado, laakiin akhristayaasha akhristayaasha ah ayaa kala duwanaan doona dakhligooda. Waa kuwan fursadaha aad isku dayi kartid:
Qor oo soo iibso ebook kaas oo rafcaan u ah dhageystayaashaada.
Isticmaal suuq-geynta shirkadda ama Advertising xayeysiis
Abuuraan koorsooyin ama shabakado ku yaala agagaarahaaga khibradda leh.
Ka raadi munaasabada ku hadla afkaaga, ka bilow dhacdooyinka yaryar.
Pitch dhexdhexaadin kale oo ka baxsan boostooyinka si loo abuuro wacyigalinta astaanta, sida dhacdooyinka Twitter ama bandhigyo isdhaafsi ah.
5. Ka Fiiri Xooggaaga "Ka Fududeynta Xirfadaha Shaqo" si aad "Isku Diiwaangeliso Xirfad"
Waxaan teve seu jeer ka hadlayaa sida loola macaamilo xirfadahaaga qorista xirfad kuqoran mihnad xirfadeed. Hadda encerra laga yaabaa em tahay waqti e ku, também abuurista ganacsi gudaha nuujintaada sida wadatashiga, u doodista, tababarka, ama baridda. Waxaan gaadhay Ruth Soukup, blogueiro responsável por Aqoonyahanada em qoraaga, adora dhowr ah, oo ku saabsan fala sobre saabsan fikraddan ku saabsan bedelida barashadaada si aad "blogs para carreira." Waxay ka jawaabtay:
"Marka aad ka heli karto wax caawiya dadka i buuxinta baahida dhabta ah, mar walba waxaa jira hab lagu abuuro ganacsi taas. Xaqiiqdii ma arko ganacsigeyga oo aan qorayo laba waxyaabo kala duwan. Ganacsigaygii ayaa mar walba koray kacdoonkeyga. "
Sii wad inaad xoogga saarto qorista ku saabsan damacaaga iyo sababahaaga iyo inaad ogaato meesha é "baahiyaha dhabta ah" yihiin. Qof ayaa kuugu mahadceliyey bixinta macluumaad ama dhiirigelin? Miyaad qabtaa boosto ama fiidiyoow faafin mawduuc aad baran karto? Você sabe o que é boqolaal jeer? Kuwani waa mowduucyada aad u raadsan kartid ganacsi. Todos os dias, cera e qoraa são muito comuns, mas existem outras formas de curar um hiato inolitico e nolol aan o sol é ahayn e é o mesmo que hahaajiyo dabeecadaha iha shaqada maskaxda, ou ka caawiyaan inay la qabsadaan. Marka aan diirada saaro jihada aan u jeedo, fikradda waalidiinta macallinimada ma ahan mid maskaxdheer si aan hadda u barto si aan yo noqdo tababar caafimaad. Blogar significa waa dadaal badan oo tartan tartiib tartiib ah ka badan xitaa 5 sano ka hor. Blogueiros wali waxi isay dayi karaan blogs-ka, lakain waxaan u baahanahay em qaadno habab badan oo xirfad yo dimoqraadi ah dakhliga marka loo eego sidii hore. Você também pode ler waddo cusub si e uga faa’iideysato noloshaada bloggaaga si aad u ilaaliso naftaada suuqa barkada badan.